🥇 ▷ Insta360 Go - Faallooyin ✅
Insta360 Go – Faallooyin
Insta360 waa boqoradda kameradda 360 digrii. taasi Hal X, looma baahna in la dhaqaaqo waa kan koowaad dhab ah Qof kastaa wuxuu isticmaali karaa kaamirooyin ficil 360-heer ah, labadaba fududeyn iyo tayo.
Si kastaba ha noqotee, ka dib markii uu ku guuleystey saddex boqol iyo lixdan darajo, myyste Insta360 wuxuu mooday inuu sii socon doono. Iyaguna waxay ku sameeyaan iyaga oo abuuraya kamarad ficil waxaan arkay: Insta360 Go.
Waxaan dhihi lahaa in badeecadan lagu qeexi karo sida kamarad waxqabadka micro.
18 garaam, xagal aad u ballaaran; taxane ah oo iskuxira Magnetic kuu oggolaanaya inaad sameyso buurta meel kasta kiisaska u dhaqma sida gundhig u ah soo gelinta iyo isweydaarsiga xogta, sida AirPods, iyo codsiyada casriyeysan awoodaan in la sameeyo fiidiyowyo kali Tani waa muujinta ugu weyn ee Insta360 Go.
Laakiin aan si faahfaahsan u galno.
Insta360 Go – camera camera
Marka, aan waxoogaa yar ka hadalno faahfaahinta, xitaa haddii, oo aan si fiican u sharixi doono hadhow, alaabooyinka sida oo kale runtii waa la mahadiyaa. sii soco xaashida macluumaadka
Si kastaba ha noqotee, waxaan haysannaa a 18 garaam leh muraayad isha kalluunka awoodaan in la duubo:
Fiidiyoowga 2720 × 2720 at 25 fps, p. 1080p at 25 fps;
Waqtiga 3040 × 3040 at 30 fps, p. 1080p at 30 fps;
Hyperlapse 2720 × 2720 at 30 fps, p. 1080p at 30 fps;
Mooshin gaabis ah 1600 × 900 at 100fps, oo ah 1600x900p at 25fps.
Dhererka ugu badan ee fiidiyowgu waa 30 ilbidhiqsiyo, iyada oo ay suuragal tahay in la xusho inta u dhexeysa 15, 30 iyo 60 ilbiriqsi midkasta. taasi Hyperlapsehalkii, waxay duubi karaan ilaa 30 daqiiqo, taas oo lamid ah fiidiyowga 5 daqiiqo Sida aniga waqti lumis Waad heli kartaa, adoo hagaajinaya waqtiga toogashada, ilaa 8 saacadood fiidiyowga 9 sekan
Ugu dambeyntiina, Insta360 Go waxay qaadan kartaa sawirro leh xalka ugu badan ee 3040 × 3040, taasoo kuxiran qaabka ugu dambeeya: 16: 9, 1: 1 ama 9:16 – waxay yeelan doontaa qaraar 2560 × 1440, 2560 × 2560 iyo 1440 × 2560, siday u kala horreeyaan.
Kaameeraha fiidiyowga ayaa sidoo kale leh qalab leh 6-axis stabilizer, kaas oo kuu oggolaanaya inaad adeegsato kuwa caan ah FlowState waxaa soo saartay Insta360, oo horeyba looga arkay badeecada heerka koowaad ee shirkadda: xasillooni dhowr ah oo kuu oggolaaneysa inaad sameyso fiidiyowyo ku dhawaad ​​sidii xasilloonida noocan ah xasilinta noocan ahi waxay sameysaa Insta360 asalka ah Kaameeraha xasilloon.
Marka laga hadlayo xusuusta gudaha, ma isticmaalo, dhab ahaantii, micro SD, waxaan haysannaa 8GB. Dabcan, waxay u muuqan kartaa waxoogaa, laakiin way ku filan yihiin oo waxay sii wadaan inay ku sameeyaan 30 fiidiyoow labaad oo ku jira FullHD.
Sidii aan sheegay, oo tanna waxaan ugu dhammaaneynaa cutubkan Faahfaahinta farsamada Insta360 Go wuxuu la imanayaa kiis kuu oggolaanaya inaad buuxiso oo aad ku xidho taleefankaaga casriga ah. Waxaa jira laba weerar hillaac Loogu talagalay iPhone, micro-USB-ka dhammaan aaladaha kale iyo ku dallacsiinta.
Nolosha batteriga waxbadan ayey kaladuwan tahay tiradu ma fududa, maxaa yeelay waxay kuxirantahay isticmaalkeeda. hay si loo iftiimiyo Dhowr daqiiqo ka dib fiidiyowga iyo sicir-bararka, ayaa lagugu qasbi doonaa inaad kiiska dhigto. Haa, dhanka kale, wali waad isticmaaleysaa laakiin banaanka Adeegso toogashadacaqli badan, natiijooyinku waxbadan bay iska badalaan: kaydintu waxay qaadan kartaa dhawr saacadood kahor intaanad dib u dhigin kiiska; Haddii ay la timaado clip, waa inaad keydisaa saacad ama laba saacadood ka dib, ugu badnaan.
Si kastaba ha noqotee, muddada lagu qiyaasey shirkadda waa 200 oo clip oo horumar ah. 18 ilbidhiqsi maalintii: guriga oo lagu rakibay kamarad. Marka la soo koobo, cabirku aad uma eka.
Kicin, sida aan sheegay, waxay u shaqeysaa sida koonto koronto iyo saldhig xukun.
Waxaan ku dhawayd waan illoobay, tani waa biyuhu biyuhu.
Halkan, si kastaba ha noqotee, waa bogga shirkadda oo leh faahfaahin dheeraad ah.
Faa’iidooyinka iyo qasaarooyinka Insta360 Go
Haddaba ka dib markaan falanqeeyo farsamada, waxaan sharxi doonaa waxa iyo waxa khaldan Insta360 Go.
Aynu bilowno pro. Tixraacyada buka waa in looga tagaa xilli dambe, ka hor gunaanadka.
Marka, shaki la’aan, qaybta ugu xiisaha badan ee sheygan ayaa ah cabirka. Xaqiiqdii, kamarad yar oo fiidiyoow ah oo caynkaas ah ayaa la dhigi karaa meel kasta Oo tanuna waa faa’iido. hal-abuurnimo
Tan kaliya maahan, haysashada shay yar oo awood u leh duubista fiidiyowga ayaa kuu oggolaaneysa inaad diiradda saarto waxa aad sameyneyso isla mar ahaantaana qabato. GoPro caadi ah ama kamarad fiidiyow ah, inta aad sameyneysid isla waxaas, waxay u baahan yihiin taxadar iyo, intaas oo dhan, way dhib badan tahay. Taas macnaheedu waa inay kaa mashquulinayaan markaad wax kale qabatid. Si kastaba ha noqotee, adoo adeegsanaya Insta360 Go, waad awoodaa Qabso daqiiqada isla mar ahaantaana ku noolow. Wax kale oo aan ahayn, aragtida uu runtii bixinayo run waxayna kuu ogolaaneysaa inaad si dhab ah u garto naftaada waxaad qabaneyso.
Qodob kale oo runtii faa iido leh ayaa ah guriga. Bixi tan khaanadaha Keydso kamaradu isla markaana kadhso isla waqtigaas aad ugu habboon. Tan kaliya maahan, isweydaarsiga xogta ayaa lagu sameeyaa fiilada, sida tan oo kale, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka fogaato dhammaan waxyeelada sanduuqyada GoPro ee caadiga ah iyo isku xirnaanta Wi-Fi, taasoo kuu horseedi doonta inaad waqti lumiso taleefanka ama joojiso inaad aragto waxa dhaca. Waad toogtay ilaa aad guriga ka tagtid.
Laxiriira tan, haddaba, waa qodobka ugu dambeeya ee Go: o dalabka. Iyada oo loo marayo barnaamijka, dhab ahaantii, ma ahan oo keliya kartid daawo duubista, laakiin sidoo kale waa la samayn karaa fuulid aad u xiiso badan oo leh astaamo badan iyo faahfaahinta.
Haddii aad rabto inaad u oggolaato inuu ku sameeyo iyada oo loo marayo AI, ama haddii aad rabto inaad u ciyaarto, waxaad had iyo jeer samayn kartaa clips kaamil ah isaga isaga iyo saaxiibbadaa iyo reerkaagaba.
Fiidiyowyo iyo sawirro ayaa loo duubay qaab ku dhow. wareegsan, Tan macnaheedu waa iyada oo loo marayo codsiga waxaan dooran karnaa inaan haysanno 16: 9, 1: 1 ama xitaa 09:16 (ku habboon sheekooyinka Instagram!). Tan kaliya maahan, waxaan u dhaqaajin karnaa xirmooyin xitaa waan sameyn karnaa foosto waxna ha sameynin Runtii, kaliya wareeji qeybta barnaamijka oo ka feker wax kasta oo kale.
Qodobka kale ee la door bidaa waa is-weydaarsiga: Insta360 Go wuxuu ku qalabaysan yahay birlabyo yaryar oo u oggolaanaya in loo isticmaalo qalab fara badan, dhammaantoodna leh qalab dhammaystiran. Waxaa laga heli karaa baakadaha. Waxaan jeclahay shaki la’aan pendant: Xirmooyinka magnetic dhabta ah ee u oggolaanaya Insta360 inay had iyo jeer ku dhowaadaan qoorta, dhammaan filimka taageerada leh ayaa sameeya qofka koowaad
Ugu dambeyntiina, oo shaki kuma jiro, xasilloonida aan caadiga ahayn. Xaqiiqdii way sarreysaa, waxay umuuqataa inay adeegsaneyso meelo rogmad badan waxaadna badanaa la yaabi doontaa sida ay suurta gal u tahay in tallaal joogto ah laga helo aaladdan yar.
Marka la soo koobo, suurtagalnimada waa badan yihiin, marka laga eego aragtidan Insta360 si heer sare ah ayaa loo dallacsiiyay.
Bal aan hadda u gudubno xagga.
Halkan, waxaan halkan ku nidhaahnaa in khudbadu u qaybsan tahay laba.
Dhinac, waa in la sheegaa, la’aanteed iyo la’aanteed, in tayada toogashada sabool ah Waan ka xumahay inaan idhaahdo, sababta oo ah waan jeclahay, laakiin wax yar ayaa la sameeyaa: in sawirro laga qaado mugdi ama iftiin hoose runtii buuq buuxo aadna uma cadda; Kuwa leh iftiinka ka baxsan iftiinka ayaa ka boodi kara laakiin kaliya gudaha 16: 9. Marka la soo koobo, aad uma fiicna.
Si kastaba ha noqotee, tanina waa qayb kale oo khudbadiisa ah. Kuwa iibsada alaabooyinkan waxay sidaas u yeelaan si ay u helaan tayo aad u fiican, ama ay isu muujiyaan siyaalo kala duwan, inay awood u yeeshaan inay u sheegaan tacabur Siyaabahee ayaannaan looga baran?
Halkan, aragtidayda labaad. Ama halkii, Waxaan u iibsaday sabab labaad. Qof kasta oo raba inuu sameeyo sawirro qurux badan oo cad, iwm, iwm, ma aha waana inuu u dhawaadaa sheyga. Waxay la mid tahay iibsashada gaari-hore oo 14-naalo ah oo gaari wadid oo iska dhigaya inaad la tartameyso gogol dhaaf.
Insta360, aragtidayda, ayaa ku dhashay aalad ahaan muujinta Haa, sida kamarad fiidiyoow ah ama kamarad, laakiin aan lahayn hamiga tayada aan caqliga lahayn. Marka la soo koobo, uma dhalan in la duubo filimada, laakiin si loo daba galo waxa aan ku qabanno iyo dheh ka duwan sidii caadiga ahayd
Oo halkan waa aan tagnaa gabagabada.
Markaa markaad iibsanayso Insta360, ha filanin sawirro aan caadi ahayn, mooshin gaabis ah waalan oo yaa garanaya imisa kun tiril oo pixels ah. Maya, markaad iibsaneyso Go, qaado alaab wanaagsan, oo si fiican loo sameeyay oo kuu oggolaaneysa inaad khibrad iyo wixii ka sarreeyaba tirin oo tirin waayo-aragnimadaada laakiin adigoon ka walwalin iyaga.
Adigu magaalo cusub ayaad ku dhex jirtaa gabadha saaxiibbadaa ah, fiiri, leh In la tago Waad sameyn kartaa xusuus dalxiis adigoon ka walwalin qabashadeeda, sababta oo ah kaliya sii haynta ayaa wada dhamaan.
Marka la soo koobo, in la soo gabagabeeyo, kamaradaha fiidiyowga ee intaas oo kale ah maahan kuwo qumman, laakiin ma doonayaan inay wanaagsanaadaan. Sababtaas awgeedna waxaan kula talinayaa qof kasta oo doonaya inuu toogto kala duwan iyo damac xasuus samee wax walaac ah oo ku saabsan fiidiyowyada ama tallaalada qumman; baahi la’aan inaad gacantaada qabsato kaamiro ama casriga.
Waa 229 euro oo waxaad ka heli kartaa halkan.